Jeegantu miyay jirtaa, ma xulufo siyaasadeedba mise waa Cudur! W/Q Muniir Ahmed Cigaal - somalilandlivemedia
10:32 21. June 2018
Jeegantu miyay jirtaa, ma xulufo siyaasadeedba mise waa cudur Ummadda lagu kala qaybiyay. Hadaad Boowe muran ka qabto anaa ku qancinaaya ee qoraalkayga akhri.
Dad badan ayaa ku dooda KULMIYE oo tallada mar labaad haya Xukunka kumuu iman Jeegaan amma laba qoys oo qori isu dhiibay may ahayn, kuwo kale ayaa ku dooda inay wax iska caadi ah iyo xirfad siyasadeed tahay oo sidaa guul lagu gaadhay . Marka hore maqaalkan iyo midkii koobna ee ka horeeyayba Xisbi anigoo matalaaya kama hadlaayo waa aragtidayda shakhsiga ah. Qofka Xisbiga WADDANI iska doonaaya inuu durow adigu sidaada ugu xoqo oo u maag.
Ugu horrayn Ergayga Jeegaan sidaan marar hore sheegay waxa loo wanqalay oo la bunbuuniyay wixii ka danbeeyay dooraahadii June 26-2010, waa doorashadii lagu doortay Axmed Siilaanyo kadib. Yaa buun buuniyay.? Waxa buun buuniyay oo u arkaayay inay wax ku helayaan tageerayaasha Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, waayo muxuu Muuse Biixi Cabdi 7-dii sanno ee uu Siilaanyo xilka hayay u xoqaayay in laba rer wax isa siiyeen hadana ay waajib tahay in isaga la siiyo? Waa sida qudha ee uu Beesha Habarjeclo wax kaga helaayay…
Ergayga Jeegaan wuxuu ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland oo Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Cali Mareexan marka ka ahayeen Wasiiro idman, Xisbiga WADDANI ma bixin jeegaan, Arabna ma bixin oo waa laga saarayba, Garxajisna ma bixin Samroon iyo Harti toona ma bixin. Dumadooda wixii Ergaygaa ummadda kaga xumaada waxa loo raacaya Madaxtooyadii Xukuumaddii Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo isagu aan eed lahayn waayo dee waxbu isagu doonaayay oo la yaabi maayo nin wax doonaya oo kursi u muuqdo siday ugu dhalayso ayuu kaga umulinayaa in kasta oo ay ahayd inuu Dalka iyo ummadda midnimadeeda u tudho wixii alle qoray wuu heli la haaye. Hadaan mid idinka qadhiidho daliilka ugu wayn ee aan ku cadaynaayo Ergayga Jeegaan cida bixisay wax ku doontay ee ku heshay hadana diidan ee is diidsiinaysa , Xisbiga KULMIYE markii uu mucaaridka aha Axmed Siilaanyo-na Guddoomiyaha ka aha, dabcan tageerada Xisbiga waa loo kala xoogana oo muran taasi maleh lakiin Xisbinimo ayaa lagu abtirsanaayay isagoo Xisbigu Mucaarid ah oo Somaliland xukun ka dhaxeeya oo kii dawladnimo ah u haynin hadana waligeen maynaan maqal Jeegaan wax qaybsanaysa iyo Siilaanyo oo olole ku galay. Cidda haysa hay keento, Ganacsatada Xisbiga KULMIYE tageeraysay rer kasta oo Somaliland ah ayay la hayeen codka labdii doorasho 2003 & 2010-kii ba Somaliland oo isu dhan ayaa siisay waliba doorashadii 2003-kii Xisbiga KULMIYE Iyo UDUB codadkii Hargaysa iyo Waqooyiga Hargaysa waliba waa laga badsaday oo way isku garab dhaceen UDUB halka tii 2010-kii Somaliland degaan kasta KULMIYE cod buuran laga siiyay waana marag madoon. Mar qudha oo ku siman markii Siilaanyo kursiga aanu bilba haynin ayay Muuse Biixi iyo tageerayaashiisu bilaabeen annaga kursiga saarnay, laba rer ayaa Madaxweynaha dhaliyay, nasiib darro Madaxtooyadiina way ictiraaftay weedhaash waanay aqbashay saakigiina waa lagu qaybiyay taasi wax qarsoon ma ahayn, Dawladii Siilaanyo ninka igu beeninaaya inay Habarjeclo iyo Habar-awal waliba Sacad Muuse shukaanta hayeen aniga hay yimaado. 2.. Markii damaca tartanka Xisbiga KULMIYE yimi, xulashada Xisbiga haddii Somaliland jirto in tartanka Xisbiga lagu saleeyo ayay ahayd.. Waxa la aqbalay oo cida sio qaada lagu qoslaayay haddii Siilaanyo murashaxnimadii ka tanaasulay in cidda lihi tahay Sacad Muuse oo kaliya, markhaati taasina uma baahna oo Erayga Jeegaan markuu shannadoobayay, waxa ka sii yaab badnaa markii Muuse Biixi kootada loogu xidhaayay murashaxnimada waxay madaxtooyadii xujo ka dhigtay sharci odhanaayay “Ninka haysta codka ugu badan ee Golaha dhexe ee Habar-Awal ayaa noqonaya murashaxa KULMIYE “. Dhammaan magacyadii golaha dhexe kaga jiray Habar-Awal waxa la geeyay Madaxtooyada waxaana qabanaayay oo kala shandhaynaayay Xoghayihii Madaxweynaha iyo Wasiirkii Madaxtooyada. Yaa marka jeegaan bixiyay amma Dalka keenay.? Adigu ka jawaab akhriste..
3 .. Jeegan waxa keenay amma ay timi markii qof kasta oo ka soo jeeda Beelaha Bariga Burco iyo Waqooyig Hargaysa oo ku jira Xisbiyada kale inta laga soo saaro oo lacag xad dhaaf ah la siiyo KULMIYE lagu daro, kii ka gaws adaygay sidaydana baadi lagu sheego. Cali Guray oo wax kasta oo qadhmuun afkiisa soo mariyay oo Muuse Biixi adduunka ugu necbaa ayaa kamid aha dadka xeerkaas ka faa’idaystay inta 200,000$ la siiyay ayaa Muuse Biixi la raaciyay. Yaa marka jeegaan keenay rer Somalilanow. Halkaas kuma joogin si toosa ayaa ololihii loogu galay rer Hebel kursiga ma gayaan iyo lagu aamini maayo. Yaa keenay marka jeegaan Dalka ma jeegaan kaliya leh oo marka inta kale way daawanaysa? Adaa iyana ka jawaabin.
4. Ugu damnayn walal waxan arkaa ragg waa wayn iyo qaar isleh faan oo yidhaahda “23-ka degmo doorasho ayuu KULMIYE 80,000 oo cod ku guulaystay.”. Waa beenta ka sidaa qabow walal. Muuse Biixi waa Madaxweynaha Somaliland ee maanta waanan aqoonsanahay Dalkaygana waan jeclahay lakiin wuxuu ka faa’iidaystay oo u shaqaysay midhii uu beertay ee aha “Jeegaan ayaanu kursigii Siilaanyo ku dhalinay ee ana igu saara”. Siilaanyo haddiiba uu cod ka helay degaanka Muuse Biixi waagi doorashadii 2010-kii. Adeer Muuse Biixi Cabdi waxa layaugu daray hiilkii dawladdii Dalka ka dhaxaysay, haybadii iyo ammaradii Ummadda ka dhaxeeyay, hantidii iyo baanankii iyo lacagihii heshiisyada ee Ummadda ka dhaxeeyay, ammaradii Ciidamadda iyo darajooyinkii Ummadda u dhaxaysay, waxaas oo dhan waligii Daahir Rayaale Kaahin doorasho uma adeegsan oo kumu galin.. Marka ka jawaabo yaa Jeegaan inoo keenay? Maxaad ula yaabaysa haddii dhibteeda iyo waxay ina dhaxal siisay laga cawdo walal… Haka guban hana is diid siin way jirtaa Jeegaani oo waliba qaar kale ayaa u soo miliqsanayee mayska dawaynaa maanta??.
Inta la og yahay illaa 17 askar boolis ah ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, sida uu bartiisa Facebook ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yusuf Garaad.
“Su’aalo iyo Jawaabo Bisha Ramadaan “Sheekh Dirir
Xukuumadda Oo Ka Hadashay Masuuliyiin Xilal Ka Hayey Xukuumaddii Hore Ee KULMIYE Oo Muqdisho Ka Degay
Newer PostFuture Energy East Africa celebrates 20 years in Nairobi in September with focus on regional access to energy
Older Post Shirka Beesha Garxajis! Dhayal Maaha ee waa Dhab!